Ebumnuche azụmaahịa na Characters 140 ma ọ bụ Naa | Martech Zone
Twitter eweghachila ha Ụlọ ọrụ azụmahịa ma gbakwunye vidiyo ọhụrụ, mara mma. Enwere m mmasị na ozi na ihe osise, ọ na-ese onyinyo doro anya nke Twitter na otu azụmahịa nwere ike isi jiri ngwa ọrụ ahụ ozugbo, chọta, zaghachi ma kwalite azụmahịa ha.
Ihe ndị bụ isi gụnyere ijikọ ndị ziri ezi, chọpụta ihe ndị ọzọ dị na Twitter na otu esi erute ha, ghọta nsonaazụ gị nchịkọta, jikota ahia ahia gi na bọtịnụ Twitter na agbakwunye Tweets, mee ka mbọ gị dịkwuo elu
ma nweta nsonaazụ site na iji usoro nkwalite nke ọma.
Twitter depụtara usoro ole na ole maka azụmaahịa iji wepụta atụmatụ Twitter ha ọkaibe:
Asọmpi & asọmpi - Ndị na-eso ụzọ ezubere iche, mee ka ha nwee mmasị, soro ha n'asọmpi ebe ha na-emegharị ma na-agbasawanye iru ndị na-ege gị ntị.
Nzaghachi ozugbo - Jiri akụkọ akwalite ezubere iche maka ndị na-ege ntị ma geotargeted na mpaghara ụfọdụ ka too nke na-eso. Zaa ma nyere aka na-eto eto na-eso.
Agbapu imeghe - Ndị na-eso ụzọ gbasara ozi ahụ site na ịghaghachi onyinye ahụ ma, mgbe ọnụọgụ ụfọdụ nke Retweets, a kwụrụ ha ụgwọ ego.
Partnership - Jikọọ ndị agha na ndị na-eme ihe ike iji bulie ozi gị ma nye oku ọrụ dị iche.
Mbido ahia - Jiri Akaụntụ Akwadoro iji dọta ndị na-eso ụzọ ọhụrụ na nchikota nke Tweets na-akwalite na oteddị Nkwalite iji tinye ndị nwere mmasị.
Twixclusive - Mwepụta ire ere ọkụ otu ụbọchị naanị na Twitter. Mee ka ọ sie ike site na ịmekọrịta otu ihe kpatara akụkụ nke ego a ga-enweta.
Jiri ihe omume itinye aka - Ngwaọrụ Twitter na ndị otu mmemme nwere ike ịmepụta ahụmịhe ahaziri iji kwalite mmemme gị.
Tags: kwalitere tweetskwalitere ndị ọrụTwittermgbasa ozi twitterihe omume twitterAhịa TwitterUsoro ịzụ ahịa twittertwitter kwalitere tweetsatụmatụ twitterusoro twitter